Taunggyi Time (တောင်ကြီးတိုင်းမ်): ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ဦးဆောင်
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ဦးဆောင်
Friday, 12 March 2010 19:11 ဧရာဝတီ
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို စီစဉ် ကျင်းပရန် အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ် ဦးသိန်းစိုး ခေါင်းဆောင်သည့် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို ကြာသပတေးနေ့ ရက်စွဲဖြင့် ဖွဲ့စည်း လိုက်ကြောင်း စစ်အစိုးရက ကြေညာလိုက်သည်။
ဥက္ကဋ္ဌ ၁ ဦး၊ အဖွဲ့ဝင် ၁၆ ဦးတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် “ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်” တွင် တရားသူကြီးများ၊ ရှေ့နေများနှင့် ပါမောက္ခများ ပါဝင်ပြီး ရှမ်း၊ ကချင်နှင့် ရခိုင်စသည့် တိုင်းရင်းသားများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း တွေ့ရသည်။
ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်အများစုမှာ လက်ရှိစစ်အစိုးရတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးပြီး မကြာသေးမီကမှ အငြိမ်းစားယူထားကြသည့် အရာရှိများဖြစ်သည်။
ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းစိုးသည် မြန်မာ့တပ်မတော်တွင် စစ်ဥပဒေချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသည်။ တပ်မတော်မှ အငြိမ်းစား ယူပြီးနောက် စစ်အစိုးရက သူ့ကို ဒုတိယတရားသူကြီးချုပ် အဖြစ် တာဝန်ပေးခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ၂၀၀၈ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေ မူကြမ်း ရေးဆွဲရေး ကော်မရှင် တွင်လည်း အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် တာဝန်ပေးခဲ့သည်။
အဖွဲ့ဝင် ဦးအင်ဇော်နော်သည် မြစ်ကြီးနားမှ အငြိမ်းစား ခရိုင်ဥပဒေအရာရှိ ဖြစ်သည်။ ကချင် တိုင်းရင်းသား ဦးအင်ဇော်နော်သည် ဦးသိန်းစိုးကဲ့သို့ပင် မူကြမ်းရေးဆွဲရေးကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။
ဒေါက်တာဘမောင်သည် သမိုင်းသုတေသနဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဖြစ်သည်။
ဦးညွန့်တင်သည် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ မဟာဗျူဟာနှင့် နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးဌာန (MISIS) တွင် အတွင်းရေးမှူး အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည်။
ဦးအောင်မြင့်သည် ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးသည်။
ဦးမြင့်နိုင်မှာ ဒုတိယရှေ့နေချုပ် ဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာတင်အောင်အေးသည် အငြိမ်းစား တရားသူကြီးချုပ် ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ မူကြမ်း ရေးဆွဲရေး ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာဒေါ်မြင့်ကြည်သည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးဌာန ပါမောက္ခဟောင်း ဖြစ်ပြီး စစ်အစိုးရ၏ အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့ချုပ်တွင် ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တာဝန် ယူခဲ့ဖူးသည်။
ဒေါက်တာမောင်ထူးသည် မုံရွာတက္ကသိုလ်မှ အငြိမ်းစား ပါမောက္ခချုပ် ဖြစ်သည်။
ကျန်အဖွဲ့ဝင်များမှာ ဦးခင်မောင်နု၊ ဦးစောဘလှိုင်၊ ဦးမောင်သာလှ၊ ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလှိုင်၊ ဒေါ်ခင်လှမြင့်၊ ဦးသာဦး၊ ဦးသာဌေး၊ ဦးဝင်းကြည်တို့ ဖြစ်ကြသည်။
ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များသည် လစာ၊ စရိတ် ကြေးငွေရသော အခြား မည်သည့် ရာထူးကိုမျှ လက်ခံခြင်း မပြုသူ၊ ထင်ပေါ် ကျော်ကြားသူ အဖြစ် စစ်အစိုးရက ယူဆသူ၊ အသက် ၅၀ ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်ဟု မတ်လ ၈ ရက်နေ့ထုတ် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥပဒေတွင် ပြဌာန်းထားသည်။
ထိုဥပဒေ ထွက်လာပြီး ၃ ရက်အကြာတွင် ၁၇ ဦးပါ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
နှစ် ၂၀ ကျော် သက်တမ်းရှိသည့် ကော်မရှင်ဟောင်းကိုလည်း ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန်သည့် ထိုဥပဒေတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ကော်မရှင်သစ်၏ တာဝန်များတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရေးအပြင် နိုင်ငံရေးပါတီများကို ကြီးကြပ်ရေးလည်း ပါဝင်သည်။
Burmese leader fears harsh military crackdown
သတင်း စီးဆင်းမှု ထိန်းချုပ်ရေး ကက-ကွန် ပြင်ဆင်နေ
US blames junta for election boycott
စက်ဖြင့် စစ်ဆေးနိုင်သည့် ပတ်စ်ပို့များ စတင်ထုတ်ဝေ
NLD Says 'No' to Election
Suu Kyi's NLD party to boycott Burma election
Daw Aung San Suu Kyi is 100% Correct
ရွေးကောက်ပွဲ ဒေါ်စုပါဝင်ခွင့် မရှိရင် ဂျပန်က စီးပွာ...
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်သည့် အခမ်းအနား ဂျပန်တွင်...
ပအိုဝ်းဝတ္ထုဆွာ (ခါင်းလစ်ပါင်ခြံကွင် တိရိစ္ဆာန်းရဲုင...
နယ်ခြားစောင့်တပ် လက်မခံကြောင်း မွန်ပြည်သစ် ထပ်မံဆု...
Fearing War, People Leave Wa Region
တီကျစ်ကျောက်မီးသွေးတွင်းကြောင့် ရွာသားများကို အန္တရ...
15 More Parties to Register
Suu Kyi Against NLD Joining Elections
No.4Steel Plant (Myingyan) of Myanmar Economic C...
Burma's long, hard road to democracy
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ အမြန်ဖွဲ့သင့်ကြောင်း လူ့အခွင...
22ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးနေ့ (ကျောင...
Burmese Reactors Close to Completion: Military Sou...
နအဖ၏စစ်ရာဇ၀တ်မှု ဖော်ထုတ်ရေး ကင်တားနား တောင်းဆို
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ဦးဆောင...
ဥပဒေ မပြင်လျှင် ပါတီမှတ်ပုံမတင်ဟု တိုင်းရင်းသား ခေ...
သတ္တုစက်ရုံစီမံကိန်းကြောင့် တောင်သူခြံမြေ ဧကရာချီ လ...
Burma 2010 Election Law
PNLO ဌာနချုပ်တွင် ကျင်းပသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့အခ...
အလုပ်သမား ၅ သိန်းကျော်ကို ဖမ်းဆီး ပြန်ပို့တော့မည်
၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ နေရာအနံ့အပြားတွင် ကျင်းပသည့် ပအိုဝ်းအ...
Pa-Oh National Day Malaysia
Oscar Hope High for 'Burma VJ'
မလေးရှားတွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့ စည်ကားစွာ ကျင်းပ